कम्युनिष्ट अनलाइन: नेपाली डिजिटल समाचारपत्र
| युनिकोड बाट प्रिती
बिहिबार, असार १२, २०७६
अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन
उपरथी तण्डुलको रथीमा बढुवा सिफारीससंगै,भावी प्रधानसेनापतिका लागी शर्मालाई बाटो खुला
प्रकाशित मिति : शनिबार, चैत्र २३, २०७५
काठमाडौं/ नेपाली सेनाका उपरथी गौर टण्डुल रथीमा बढुवा सिफारीस भएका छन् । प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापा टण्डुललाई बढुवा गर्ने पक्षमा नभएको चर्चा चलिरहेको बेला रथी बढुवाको प्रक्रिया अघि बढेको हो । सैनिक स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार बलाध्यक्षरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड वैठकले टण्डुललाई रथीमा बढुवा सिफारीस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापाले गिरी नेतृत्वको बोर्ड वैठकको निर्णय शुक्रवार सदर समेत गरिसकेका छन् ।
सेनाका हालका बलाधिकृतरथी हेमन्तराज कुंवर आगामी वैशाख ११ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जांदैछन् । सेनामा रथीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । अवकास हुन् १५ दिन अघि नै विदामा वस्नुपर्ने सैनिक परम्पराअनुसार कुवंर यही चैत २८ मा विदामा बस्ने तयारीमा छन् ।
रथीमा बढुवा सिफारिस भएका उपरथी टण्डुल ।
कुंवर विदामा वस्नु एक हप्ताअघि नै टण्डुलको बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको छ । उनको बढुवाको दावी विरोधको लागी एक हप्ते सुचना समेत प्रकाशित भइसकेको छ । तण्डुल रथीमा बढुवा नभएको अवस्थामा वैशाख १९ मा अनिवार्य अवकासमा जांदै थिए ।
बढुवा समितिले टण्डुलको सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को परिच्छेद ३ को सरुवा बढुवासम्बन्धी नियमावलीको नियम ३३ को क बमोजिम बढुवा सिफारीस गरिएको जनाइएको छ । तर, यो नियमावलीअनुसार बढुवाको लागी १५ दिने सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सेनाले ७ दिने सुचना मात्र प्रकाशित गरेको छ ।
तर, हालसालै संशोधित सैनिक नियमावली २०७५ अनुसार भने रथी बढुवाको लागी ७ दिने सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा रथीमा बढुवा हुनका लागी एक वर्ष पृतनाको कमाण्ड गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा उपरथी टण्डुलको रथी बढुवा सिफारीस त्रुटीपुर्ण रहेको देखिन्छ ।
किनभने उनले पृतनाको कमाण्ड जम्मा सात महिना गरेका छन् । नयां नियमअनुसार रथीमा बढुवा हुनको लागी एक वर्ष पृतनाको कमाण्ड गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर,सेनाका एक उपरथीले भने संशोधित नियमावली केही समयपछि मात्र लागु हुने बताए ।
वरियताको आधारमा भने रथी बढुवाको लाईनमा उपरथी गौरव तण्डुल नै त्यसका हकदार हुन् । टण्डुलको रथीमा बढुवा सिफारीससंगै अर्का उपरथी प्रभुराम शर्मा प्रधानसेनापति वन्ने बाटो खुला भएको छ । किनभने टण्डुल बढुवा भएको अवस्थामा शर्मा उनले २०७७ वैशाख १९ मा अवकास पाएपछि मात्र उनको ठाउंमा तिन तारे जर्नेल बन्नेछन् । त्यसपछि हालका प्रधानसेनापति थापाले २०७८ साल भदौमा अवकास पाइसकेपछि उनको ठाउंमा शर्मालाई प्रधानसेनापति वन्ने बाटो खुल्नेछ ।
टण्डुलको रथीमा बढुवा नभएको अवस्थामा शर्मा नै रथीमा बढुवा हुने लाईनमा थिए । त्यसो हुंदा उपरथी शर्माको हालका प्रधानसेनापति थापाझै रथीमा पदावधी एक वर्ष थप गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यदि केही गरी प्रधानसेनापतिले उनको एक वर्ष पदावधी थप नगरे उनि रथीबाटै अवकास पाउने निश्चतजस्तै थियो ।
यसरी हेर्दा शर्माको लागी टण्डुल रथीमा बढुवा हुनु नै उनलाई प्रधानसेनापति वन्ने वाटो खुला भएको हो । टण्डुल उमेर हदका कारण २०७७ वैशाख १९ मै अवकास पाउनेछन् । यद्यपी शर्माको उपरथीमा पदावधी भने थप गर्नुपर्ने हुन्छ । उनको उपरथीको पदावधी आगामी वर्षको कार्तिकमा सक्किदै छ ।
सामान्यतया उपरथीको पदावधी थप हुने भएकाले शर्मा नै भावी प्रधानसेनापति वन्ने निश्चित भएको छ । हाल युद्धकार्य महानिर्देशक समेत रहेका शर्मालाई प्रधानसेनापति बन्न सजिलो हुने गरी नै सेनापति थापाले टण्डुलको बढुवा गरेको चर्चा सैनिक वृतमा छ । यदि तण्डुलको रथीमा बढुवा नभएको अवस्थामा प्रधानसेनापतिका लागी अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएपछि प्रधानसेनापति थापाले उक्त बाटो वन्द गरेको चर्चा सैनिक वृतमा छ ।
सेनामा टण्डुलको रथीमा बढुवासंगै शर्मा थापाको उत्तराधिकारी बन्ने निश्चित भएको छ । थापा सेनापतिमा नियुक्त भएसंगै शर्मालाई सेनामा प्रधानसेनापति बन्नुभन्दा पहिले दिईने युद्धकार्य महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा ल्याईएको थियो । शर्माले भारतबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स गरेका हुन् । उनि सेनामा क्षमतावान् र विवादमा नआएका सैनिक अधिकारीका रुपमा चिनिन्छन् । सेनाका अर्का रथी गिरी २०७७ असार ६ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जानेछन् ।
गृहमन्त्री बादल आईजीपीसँग रुष्ट, गृहको आदेश बिना ‘इन्काउन्टर’ आदेश किन ?
अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संघको विस्तारित बैठक सम्पन्न, अध्यक्षमा बिमला आचार्य चयन
सधै विद्रोही स्वभाबका विप्लवले के राजनीतिक निकास देला !
मन्त्री स्तरीय निर्णय नै नगरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पत्र लेखे : समिति सभापति विडारी
अन्टुफ रुपन्देही बैठकद्धारा संगठन विस्तारको घोषणा
अदालतमा १३ सय वर्ष कैद र रु ८७ लाख जरिवाना बाँकी
हजुरआमा बनिसक्दा पनि नागरिकता छैन
एसईईको परीक्षाफल सार्वजनिक, यसरी हेर्नुस् नतिजा
विश्व मजदुर आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास
चीन विकासका भित्री नीतिको खुलासा
विप्लवसँग अब वार्ता हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
अध्यक्ष : गंगा कार्की
प्रबन्धक निर्देशक : सोम बहादुर तमाङ
सम्पादन सल्लाहकार : बलराम थापा
सम्पादक : जय कार्की
सह-सम्पादक : रामचन्द्र कार्की
सह-सम्पादक : शरद सुबेदी
समाचारदाता : लालकुमार बराल
फोटो पत्रकार : जितु तमाङ
© 2017-2019 Communist Online All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology